सदीक्षालाई मनोज गजुरेलको सन्देश : तिम्रो साहसलाई सलाम छ ! – Nepal Press
सदीक्षालाई मनोज गजुरेलको सन्देश : तिम्रो साहसलाई सलाम छ !
२०७७ फागुन १३ गते १४:४७
वरिष्ठ हास्यकलाकार मनोज गजुरलले आफ्नो दाजुको शंकाष्पद मृत्यूपछि न्यायका लागि लडिरहेकी उर्लाबारीकी चेली सदीक्षा बाँस्तोलाको प्रशंसा गरेका छन् । फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सम्वन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन् ।
उर्लाबारीका युवा प्रविण बाँस्तोला दुई महिना अगाडि मृत अवस्थामा भेटिएका थिए । अमेरिकामा बिमान चालकको तालिम गरिरहेकी सदीक्षा दाजुको निधनपछि नेपाल आएकी थिइन् । त्यसयता उनले न्यायका लागि प्रहरी–प्रशासनको ढोका निरन्तर ढक्ढकाइरहेकी छन् ।
नेपाल प्रेसले हिजो यस घटनाबारे विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । त्यसलाई साभार गर्दै गजुरेलले फेसबुकमा स्टाटस लेखेका हुन् । उनले घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन उर्लाबारीका जनता, जनप्रतिनिधि र जिल्ला प्रशासनसँग आग्रह गरेका छन् ।
प्रकाशित: २०७७ फागुन १३ गते १४:४७